FIATREHANA NY CORONAVIRUS ANY ANTSIRANANA : Najoro ny « cellule de crise »
Manoloana ny valanaretina Coronavirus, tsy miraviravy tanana ny tompon’andraikitra any amin’ny tapany Avaratry ny Nosy ary samy mandray ny andraikitra tandrify azy avy. 25 mars 2020
Omaly maraina, nitarika fivoriana niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Tafika, ny Zandary ary ny Polisy ny depiote Jocelyne Maxime izay sady filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena.
Tapaka nandritra ity fivoriana ity fa mikatona aloha ny toeram-pisotroana rehetra ary tokony horaràna ny fivezivezena amin’ny alina. Ny prefe amin’ny maha solontenam-panjakana azy no tokony hamoaka didy ny amin’ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina na « couvre-feu » ao an-tampon-tanànan’Antsiranana fa tsy niatrika ny fivoriana ny tenany.
Na izany anefa na tsy izany tapaka fa manomboka amin’ny 8 ora alina hatramin’ny 5 ora maraina dia tsy mahazo mivezivezy intsony ao an-tapon-tanànan’Antsiranana. Ho fanampiana ireo mpitandro filaminana amin’ny asa miandry azy dia nanolotra vola mitentina 3 tapitrisa ariary ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena hividianan’izy ireo solika. Samy nahazo 1 tapitrisa ariary avy araka izany ny Tafika, Zandary ary ny Polisy.
Hoentanina isan’andro ny mponina ka mbola ny depiote Jocelyne Maxime no nanome fanamafisam-peo ary miantoka ny lany rehetra amin’ny fanaovana izany. Natsangana araka izany ny atao hoe « Cellule de crise » ka miainga ao avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra horaisina amin’ny ady atao amin’ny valanaretina Coronavirus. Ao amin’ny biraon’ny Faritra Diana no misy ny foibeny. Nodinihana nandritra ny fivoriana ihany koa ny toerana hametrahana ireo olona hatoka-monina raha sanatria ka miseho izany.
Vonona ny hitondra ny anjara birikiny ho an’ny tanànan’Antsiranana izao ny sehatra tsy miankina tahaka ny Hôtel de la Poste. Nomen’ny tompon’andraikitr’ity farany ho fanampiana ny « cellule de crise » ny rihana fahaefatra an’ilay hotely. Tsy vitan’izay fa mbola ity hotely ity ihany koa no miantoka ny sakafo. Taorian’ny fivoriana, ankoatra ny fitsidihana ilay rihana natokana ho an’ny « cellule de crise » dia nidina teny amin’ireny « grande surface » sy toerana fivarotana katy ireny ny tompon’andraikitra, ka nanentana hatrany ny amin’ny tokony hanajana ny elanelana iray metatra.